Oğuzကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာOguz Arda ရေလွှမ်းမိုး
Selin ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းပိုဒ်: " '' သင် Sun က၏အမှန်တရားကိုပြသပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Make
Corlu ရထား Hakan Özer Selim Selim အတွက် Oguz Arda သားနဲ့ဇနီးဟောင်းရေလွှမ်းမိုးဘေးဥပဒ်ကို Misra သမ္မတအာဒိုဂန်ရဲ့ AKP ရှုံး, TCDD အတွက်အာဏာပိုင်များအပေါ်ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 8 2018 Kapıkule-အစ္စတန်ဘူလ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ဦးခရီးသည် [ပို ... ]
Tekirdag ၏ Corlu ခရိုင်၊ 8 ဇူလိုင် 2018 သည် 25 နိုင်ငံသားများသေဆုံးပြီး 317 နိုင်ငံသားများသည်Çorluရထားမတော်တဆမှု၏ပထမနှစ်ပတ်လည်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သေဆုံးသူများ၏ဆွေမျိုးများကအခမ်းအနားတွင်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ကြသည်။ [ပို ... ]
Çorluကို 'ကျနော်တို့ဆောင်ကြဉ်း Love' 'ကနေတူရကီပြည်နယ်မီးရထားရထားဘေးဥပဒ်ကိုတွစ်တာအကောင့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူဗွီဒီယိုတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဖြစ်ဆိုးရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မိသားစုများအပေါ်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုတုံ့ပြန်။ လူရာပေါင်းများစွာÇorlu 25 လူတို့သည်မိမိတို့အသက်ဆုံးရှုံးဒဏ်ရာရ [ပို ... ]
အဆိုပါ TCDD '' ကလေးတွေကကလပ် '' တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းပိုဒ်
TekirdağÇorluခရိုင်ရှိ 8 ဇူလိုင်လတွင် 20185ရထားမတော်တဆမှုတွင်Kapıkuleမှ Istanbul သို့ရွေ့လျားသည့်ရထားသည် luorlu အနီးတွင်ဖြတ်သန်းသွားပြီးရထားလမ်းများအောက်တွင်ကျဆင်းသွားသောမြေဆီလွှာလမ်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
မိခင် Corlu ရထားမတော်တဆအတွက်သူမရဲ့သားကိုဆုံးရှုံး: အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံမှသနားခြင်းကရုဏာဆန္ဒရှိမနေပါနဲ့! နုတ်ထွက်သွားရောက်ကြည့်ရှု!
ဇူလိုင်လÇorluတွင်ရထားမတော်တဆမှုကြောင့်သူမ၏သားဆုံးရှုံးခဲ့ရသော Mssra Öz Sel သည်ယနေ့တွင်တူရကီနိုင်ငံ၌ဖြစ်ပွားသောမတော်တဆမှုအပြီးတွင်ပုန်ကန်ခဲ့ပြီးသူမ၏နုတ်ထွက်မှုကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ Norlu ရထားပျက်သွားရာ9နှစ်အရွယ်သားOğuz Arda [ပို ... ]
TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးက The မိခင်က Twitter ကို Block အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်Çorluအတွက်မီးရထားမတော်တဆမှုအတွက်မိမိသားပျောက်ဆုံးနေတဲ့
Tekirdağ၏Çorluခရိုင်ရှိ 8 ဇူလိုင်လ 2018 တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောရထားမတော်တဆမှုတွင်သူမ၏သားOğuz Arda Sel နှင့်သူမ၏ဇနီးဟောင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသော Mssra Öz၏တရားမျှတမှုကိုဆက်လက်ရှာဖွေသည်။ ၎င်း၏အသံကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကြားစေရန် [ပို ... ]
အဆိုပါ Oguz Arda Selin ခုနစ်၏ကျောင်းသားဆောင်းရာသီပစ္စည်းများ
ဒီနွေရာသီမှာ Tekirdag ရထားမတော်တဆမှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့ Galatasaray ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Oguz Arda Sel ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကကျောင်းမှကျောင်းသားများအားဆောင်းရာသီပစ္စည်းများကိုသူတို့က Edirne ရှိKeşanခရိုင်တွင်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ထားသောပစ္စည်းများကိုပေးအပ်သည်။ Tekirdag အတွက်ရထား [ပို ... ]
SMS ကိုတုံ့ပြန်မှုဝန်ကြီးဌာန: "အဘယ်သူမျှမကလေးသည်ရထားမတော်တဆအကြောင်းထဲမှာကွယ်လွန်"
luorlu ရှိရထားဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော Mssra Öz Sel သည်ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှပေးပို့သော SMS ကို 'ငါတို့ကလေးတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့' ဟုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ Corlu တွင်ရထား [ပို ... ]
Uzunköprüမြူနီစီပယ်က 258 မှမှတ်ပုံတင်ထားသောOğuz Arda ရေလွှမ်းဘောလုံးအကယ်ဒမီကိုUzunköprüမြူနီစီပယ်၏Uzunköprüမြူနီစီပယ်လူမှုရေးအဆောက်အ ဦ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရိုင်တွင်ပညာသင်ကြားနေသော 7-14 အသက်အရွယ်ကျောင်းသားများ၏ဘောလုံးအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းသည်ဆိုးသည် [ပို ... ]
အနုပညာ Selin Oguz ဘောလုံးအကယ်ဒမီ၏ကိုယ်စား Corlu ရထားမတော်တဆမိမိအသက်ကိုဆုံးရှုံး
Çorluသည်ရထားမတော်တဆမှုကြောင့်ကွယ်လွန်သွားပြီး Arda Sel Oguz ဘောလုံးအကယ်ဒမီကိုသူ၏ဇာတိမြို့Uzunköprü'deတွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ Uzunköprüမြို့တော်ဝန် Enis Isbilen သည်သူ၏ရေးသားထားသောကြေညာချက်တွင် Oguz Arda Sel [ပို ... ]